Urdolls Usoro Ojiji
Na usoro ndị a - "onye na - ere" pụtara onye na - ere ngwongwo akọwapụtara ebe a; “onye na-azụ ihe” pụtara ụlọ ọrụ ahụ zụrụ ngwongwo ahụ, tinyere ndị nọchiri ya; "Ngwaahịa" pụtara ngwaahịa ndị erere, webata, bute ma / wepụta ya maka onye zụrụ ya. Ngwongwo, ngwaahịa na akụrụngwa.
Alaghachi na nkwụghachi
1. Ndaghachi azụ:
Ezubere nwa bebi gị maka ndị ahịa gị dabere na ihe ha chọrọ. Anyị enweghị ike ịre ahịa nke abụọ. Nwa bebi niile gafere ọtụtụ ule tupu ha ahapụ ụlọ ọrụ anyị, yabụ anyị agaghị ewepụta ọrụ nloghachi maka ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na nwa bebi ahụ nwere nkwarụ ma ọ bụ mebie mgbe anyị natara nwa bebi ahụ maka oge mbụ, anyị agaghị edochi nwa bebi ahụ, mana anyị ga-enye vidiyo mmezi na ngwaọrụ dabere na mmebi ahụ. (nwere ike ịchọ obere ego n'aka onye ahịa)
N'oge ahụ ugwo onye ahịa ahụ gara nke ọma, enyere anyị iwu njedebe ma ewepụta ụlọ ọrụ mmepụta ihe ozugbo. Ya mere, anyị agaghị enye nkwụghachi maka ihe ọ bụla.
Anyị na-ebupụ ngwaahịa anyị naanị site na ndị ọrụ ahịa ama ama zuru ụwa ọnụ (DHL / UPS). Urdoll.com abụghị maka ihe ọ bụla igbu oge site na shipper.
Ozugbo ebuchara ngwaahịa gị, anyị ga-ezitere gị nọmba nsuso site na email ka ị nwee ike nyochaa nnyefe sitere na weebụsaịtị web shipper.
Ọnụahịa anyị niile gụnyere tarifu ma ị gaghị akwụ ụgwọ ọ bụla ọzọ.
Ọrụ onye na-azụ ahịa bụ ijide n'aka na enyere ndị ngwaahịa ọ zụrụ ikike n'obodo ya.
Site n'iji weebụsaịtị a, ị dịkarịa ala afọ nke ọtụtụ na steeti ma ọ bụ ógbè gị, ma ọ bụ na ị bụ ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke steeti ma ọ bụ ógbè gị, ma ị kwenyela ikwe ka ndị otu ezinaụlọ gị na-eto eto ghara iji weebụsaịtị a. naanị ree ụmụ amaala 18 afọ.
Usoro ọrụ ndị a yana nkwekọrịta ọ bụla dị iche iche anyị ji enye gị Ọrụ ka a ga-achịkwa ma rụọ ya dịka iwu nke UK.
Anyị ji nzuzo gị kpọrọ ihe na nkwupụta nzuzo a na-akọwa otu www.urdolls.com (mkpokọta, “anyị,” “anyị,” ma ọ bụ “nke” anyị) si achịkọta, jiri, kekọrịta na hazie ozi gị.
Mkpokọta na iji data nkeonwe
Data nkeonwe bụ ozi enwere ike iji ya wee kọwaa gị. Ihe data nkeonwe gunyere data n’enweghị aha nke jikọrọ ya na ozi enwere ike iji ya kọwaa gị. Ihe data nkeonwe etinyeghi data nke ezoro ezo ma ọ bụ chịkọta ya ka o wee nwee ike ọ gaghịzi enyere anyị aka, ma yana ozi ndị ọzọ ma ọ bụ na uzọ ọzọ, iji mata gị.
Na-akwalite nchekwa na nchekwa
Anyị na-agbaso ụkpụrụ nke iwu, izi ezi, na nghọta, iji, na ịhazi data pere mpe n'ime oke ebumnuche, ma were usoro nchịkwa na nhazi iji kpuchido nchekwa nke data ahụ. Anyị na-eji data nkeonwe iji nyere aka nyochaa njirimara na ọrụ onye ọrụ, yana ịkwalite nchekwa na nchekwa, dịka site na nyochaa aghụghọ na nyocha ihe enyo ma ọ bụ nke nwere ike ịbụ iwu na-akwadoghị ma ọ bụ mmebi nke usoro anyị ma ọ bụ iwu anyị. Processingdị nhazi a gbadoro ụkwụ na ezigbo mmasị anyị nwere iji nyere aka hụ nchekwa nke ngwaahịa na ọrụ anyị.
Nke a bụ nkọwa nke ụdị data nkeonwe anyị nwere ike ịnakọta yana otu anyị nwere ike isi jiri ya:
Kedu ihe data anyị na-anakọta
Ⅰ. Data ị nyere:
Anyị na-anakọta data nkeonwe ị nyere mgbe ị jiri ngwaahịa na ọrụ anyị ma ọ bụ na anyị na-emekọrịta ihe ọzọ, dị ka mgbe ị mepụtara akaụntụ, kpọtụrụ anyị, sonye na nyocha ịntanetị, jiri enyemaka anyị n'ịntanetị ma ọ bụ ngwaọrụ nkata n'ịntanetị. Ọ bụrụ n'ịzụta ihe, anyị na-anakọta data nkeonwe n'ihe metụtara nzụta ahụ. Ihe data a gụnyere data ịkwụ ụgwọ gị, dị ka nọmba kaadị akwụmụgwọ gị ma ọ bụ nọmba debit na ozi kaadị ndị ọzọ, na akaụntụ ndị ọzọ na ozi nyocha, yana ịgba ụgwọ, mbupu, na nkọwa kọntaktị.
Ⅱ. Data gbasara iji ọrụ na ngwaahịa anyị:
Mgbe ị gara na webụsaịtị anyị, anyị nwere ike ịnakọta data gbasara ụdị ngwaọrụ ị na-eji, ihe nchọpụta pụrụ iche nke ngwaọrụ gị, adreesị IP nke ngwaọrụ gị, sistemụ arụmọrụ gị, ụdị ihe nchọgharị thatntanetị ị na-eji, ozi ojiji, ozi nyocha, na ozi ọnọdụ sitere na ma ọ bụ maka kọmputa, ekwentị, ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ nke ị rụnyere ma ọ bụ nweta ngwaahịa na ọrụ anyị. Ebe ọ dị, ọrụ anyị nwere ike iji GPS, adreesị IP gị, na teknụzụ ndị ọzọ iji chọpụta ebe ọnọdụ ngwaọrụ dị iji nyere anyị aka ịkwalite ngwaahịa na ọrụ anyị.
Otu Anyị Si Eji Data Nkeonwe Gị Mee Ihe
N'ikwu okwu n'ozuzu, anyị na-eji data nkeonwe iji nye, melite, na ịzụlite ngwaahịa na ọrụ anyị, iji kpọtụrụ gị, iji nye gị mgbasa ozi na ọrụ ezubere iche, na iji kpuchido anyị na ndị ahịa anyị.
Ⅰ. Inye, meziwanye ma mepee ngwaahịa na ọrụ anyị:
Anyị na-eji data nkeonwe iji nyere anyị aka ịnye, melite, ma mepee ngwaahịa, ọrụ na mgbasa ozi anyị. Nke a gụnyere iji data nkeonwe maka ebumnuche dịka nyocha data, nyocha na nyocha. Processingdị nhazi a gbadoro ụkwụ na mmasi anyị nwere n'inye gị ngwaahịa na ọrụ yana maka ịga n'ihu azụmaahịa. Ọ bụrụ na i tinye asọmpi, ma ọ bụ nkwalite ndị ọzọ, anyị nwere ike iji data nkeonwe ị nyere iji nye mmemme ndị ahụ. Offọdụ n'ime ọrụ ndị a nwere iwu ndị ọzọ, nke nwere ike ịnwe data ọzọ gbasara otu anyị si eji data nkeonwe, yabụ anyị na-agba gị ume iji nlezianya gụọ iwu ndị ahụ tupu ị sonye.
Ⅱ. Na-agwa gị okwu:
Isonye na nkwupute nkwenye izizi gị, anyị nwere ike iji data nkeonwe zitere gị nkwukọrịta ahịa gbasara ngwaahịa na ọrụ nke anyị, gwa gị gbasara akaụntụ ma ọ bụ azụmahịa gị, ma gwa gị gbasara iwu na usoro anyị. Ọ bụrụ na ịchọghịzị ị nweta nkwukọrịta ozi-e maka ebumnuche azụmaahịa, biko kpọtụrụ anyị iji pụọ. Anyị nwekwara ike iji data gị hazie ma zaghachi arịrịọ gị mgbe ị kpọtụrụ anyị. Isonye na nkwupute nkwupute izizi gị, anyị nwere ike ịkekọrịta data nkeonwe gị na ndị mmekọ ndị ọzọ nwere ike zitere gị nkwukọrịta ahịa gbasara ngwaahịa na ọrụ ha. Dabere na nnabata nkwupute gị izizi, anyị nwere ike iji data nkeonwe iji hazie ahụmịhe gị na ngwaahịa na ọrụ anyị yana weebụsaịtị na ngwa ndị ọzọ na iji chọpụta ịdị irè nke mkpọsa nkwado anyị.
MARA: Maka otu ojiji nke data gị kọwara n’elu nke chọrọ nkwenye nkwupute izizi gị, rịba ama na ị nwere ike ịdọrọ nkwenye gị site na ịkpọtụrụ anyị.
Nkọwa nke "Kuki"
Kuki bụ obere ederede eji echekwa ozi na ihe nchọgharị weebụ. A na-ejikarị kuki iji chekwaa ma nata njirimara na ozi ndị ọzọ na kọmputa, ekwentị, na ngwaọrụ ndị ọzọ. Anyị na-ejikwa teknụzụ ndị ọzọ, gụnyere data anyị na-echekwa na ihe nchọgharị weebụ gị ma ọ bụ ngwaọrụ gị, ihe njirimara metụtara ngwaọrụ gị, na ngwanrọ ndị ọzọ, maka ebumnuche ndị yiri ya. Na Nkwupụta kuki a, anyị na-ezo aka na teknụzụ ndị a niile dị ka "kuki."
Anyị na-eji kuki iji nye, kpuchido ma melite ngwaahịa na ọrụ anyị, dị ka site na ịhazi ọdịnaya, ịnye na ịtụ ngbasa ozi, ịghọta njirimara onye ọrụ, na ịnye ahụmịhe dị mma. Biko rịba ama na kuki akọwapụtara nke anyị nwere ike iji dị iche iche dabere na weebụsaịtị na ọrụ ndị ị jiri.
Ngosipụta nke Ozi Nkeonwe
Anyị na-eme ụfọdụ data nkeonwe anyị na ndị mmekọ dị mkpa na-arụ ọrụ na anyị iji nye ngwaahịa na ọrụ anyị ma ọ bụ nyere anyị aka ịre ndị ahịa. Anyị na ụlọ ọrụ ndị a ga-ekerịta data nkeonwe iji nye ma ọ bụ melite ngwaahịa, ọrụ na mgbasa ozi anyị; agaghi ekenye ya na ndi ozo maka ebumnuche ahia ha n’enweghi nkwenye mbu gi.
Ngosipụta Data ma ọ bụ Nchekwa, Nyefe, na Nhazi
Ⅰ. Imezu iwu nke iwu:
N'ihi iwu dị mkpa nke European Economic Area ma ọ bụ mba onye ọrụ bi na ya, enwere ụfọdụ iwu iwu ma ọ bụ mee ma ụfọdụ iwu iwu kwesịrị imezu. Ọgwụgwọ nke data onwe onye nke ndị bi na EEA - Dịka akọwara n'okpuru, ọ bụrụ na ibi na European Economic Area (EEA), nhazi nke data nkeonwe gị ga-abụ nke ziri ezi: Mgbe ọ bụla anyị chọrọ nkwenye gị maka ịhazi data nkeonwe gị A ga-agu ikpe ziri ezi dabere na edemede 6 (1) nke Iwu Nchedo Data General (EU) ("GDPR").
Ⅱ. Maka nzube nke itinye n'ọrụ ma ọ bụ itinye akwụkwọ edemede a:
Anyị nwere ike ịkekọrịta data nkeonwe na ụlọ ọrụ anyị niile nwere mmekọ. N'ihe banyere njikọta, ịhazigharị, nnweta, nkwonkwo aka, ọrụ, ntụgharị, ịnyefe, ma ọ bụ ọrịre ma ọ bụ ịchụpụ ma ọ bụ akụkụ ọ bụla nke azụmaahịa anyị, gụnyere n'ihe metụtara enweghị ego ma ọ bụ usoro ọ bụla yiri nke a, anyị nwere ike ịnyefe ọ bụla na data nkeonwe niile nye ndị ọzọ dị mkpa. Anyị nwekwara ike igosipụta data nkeonwe ma ọ bụrụ na anyị ejiri ezi okwukwe kpebie na nkwupụta ahụ dị oke mkpa iji kpuchido ikike anyị ma na-agbaso usoro ọgwụgwọ dịnụ, na-agbaso usoro na ọnọdụ anyị, nyochaa aghụghọ, ma ọ bụ kpuchido ọrụ anyị ma ọ bụ ndị ọrụ anyị.
Ⅲ. Nnabata iwu na nchekwa ma ọ bụ chedo ikike ndị ọzọ
O nwere ike ịdị mkpa-site n’iwu, usoro iwu, ịgba akwụkwọ, na / ma ọ bụ arịrịọ sitere n’aka ndị gọọmentị na ndị gọọmentị n’ime ma ọ bụ n’èzí obodo obibi gị — ka anyị gosipụta data nkeonwe. Anyị nwekwara ike igosipụta data nkeonwe ma ọ bụrụ na anyị ekpebie na maka ebumnuche nke nchedo obodo, ndị mmanye iwu, ma ọ bụ nsogbu ndị ọzọ dị mkpa nke ọha, ikpughe dị mkpa ma ọ bụ kwesịrị ekwesị.
Ngwaahịa na ọrụ anyị bụ maka ndị okenye. N'ihi ya, anyị akpachaghị anya na-anakọta, jiri, ma ọ bụ gosipụta data sitere na ụmụaka n'okpuru afọ 16. Ọ bụrụ na anyị mụta na anyị anakọtara data nkeonwe nke nwatakịrị n'okpuru 16, ma ọ bụ afọ pekarịrị nke dabere na ikike, anyị ga-eme ihe iji kpochapụ data ozugbo enwere ike. Biko ozugbo kpọtụrụ anyị ọ bụrụ na ị mata na nwatakịrị nọ n'okpuru 16 enyela anyị data nkeonwe.
Anyị na-eme usoro kwesịrị ekwesị iji hụ na data nkeonwe gị ziri ezi, zuru oke, ma dị ọhụrụ. I nwere ikike ịnweta, dozie ma ọ bụ hichapụ data nkeonwe anyị na-anakọta. I nwekwara ikike igbochi ma ọ bụ jụ, n'oge ọ bụla, na nhazi nke data nkeonwe gị. Nwere ikike ịnara data nkeonwe gị n'ụdị ahaziri ahazi. Nwere ike tinye akwụkwọ mkpesa n'aka ndị ọrụ ikike nchebe data gbasara nhazi nke data onwe gị. Iji kpuchido nzuzo gị na nchekwa nke data nkeonwe gị, anyị nwere ike ịrịọ data n'aka gị iji nyere anyị aka ịkwado njirimara gị na ikike ịnweta ụdị data ahụ, yana ịchọ na ịnye gị data nkeonwe anyị na-echekwa. Enwere oge ebe iwu dị ma ọ bụ iwu chọrọ chọrọ ma ọ bụ chọọ ka anyị jụ ịnye ma ọ bụ hichapụ ụfọdụ data nkeonwe anyị na-echekwa. Nwere ike ịkpọtụrụ anyị ka ị jiri ikike gị. Anyị ga-aza arịrịọ gị na oge kwesịrị ekwesị, yana ihe omume ọ bụla na-erughị ụbọchị 30.
Ebe nrụọrụ na Ọrụ Ndị Ọzọ
Mgbe onye ahịa na-ejikọ njikọ nke weebụsaịtị nke ndị ọzọ nwere mmekọrịta anyị, anyị anaghị ewere ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ibu ọrụ maka iwu dị otú ahụ n'ihi iwu nzuzo nke ndị ọzọ. Weebụsaịtị anyị, ngwaahịa na ọrụ anyị nwere ike ịnwe njikọ ma ọ bụ ike gị iji nweta weebụsaịtị, ngwaahịa na ọrụ ndị ọzọ. Anyị anaghị arụ ọrụ maka omume nzuzo nke ndị ọzọ ahụ na-arụ, anyị anaghịkwa aza maka ozi ma ọ bụ ọdịnaya nke ngwaahịa na ọrụ ha nwere. Nkwupụta Nzuzo a metụtara naanị data anakọtara site na ngwaahịa na ọrụ anyị. Anyị na-agba gị ume ka ị gụọ iwu nzuzo nke ndị ọzọ ọ bụla tupu ịmalite iji weebụsaịtị, ngwaahịa, na ọrụ ha.
Nche data, iguzosi ike n'ezi ihe, na njigide
Anyị na-eji usoro teknụzụ, nhazi, na nchekwa anụ ahụ dabara adaba iji chebe ma nyere aka gbochie ịnweta data gị na-enwetaghị ikike, yana iji data anyị nakọtara n'ụzọ ziri ezi. Anyị ga-ejigide data nkeonwe gị ọ bụrụhaala na ọ dị mkpa iji mezuo ebumnuche ndị edepụtara na Nkwupụta Nzuzo a, belụsọ na iwu chọrọ ma ọ bụ hapụ ogologo oge ijide.
Mgbanwe na Nkwupụta Nzuzo a
Anyị nwere ike ịgbanwe nkwupụta Nzuzo a site n'oge ruo n'oge iji soro teknụzụ ọhụụ, omume ụlọ ọrụ, yana usoro iwu chọrọ, n'etiti ihe ndị ọzọ. Continuednọgide na-eji ngwaahịa na ọrụ anyị mgbe ụbọchị dị mma nke Nkwupụta Nzuzo pụtara na ị nabatara nkwupụta Nzuzo ahụ edegharịrị. Ọ bụrụ na ị kwenyeghi na ederede emegharịrị anyị Nkwupụta Nzuzo, biko zere iji ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị ma kpọtụrụ anyị ka anyị mechie akaụntụ ọ bụla ị mepụtara.
Ọ bụrụ n’inwee ajụjụ ọ bụla gbasara Nkwupụta Nzuzo a ma ọ bụ mmejuputa ya, lee otu ị ga - esi nweta anyị: service@urdolls.com
a. Ndị ahịa ga-akwụ ụgwọ naanị otu ugboro maka ụgwọ mbupu (nke a gụnyere nloghachi); Achọpụtaghị nkwụghachi ụgwọ maka ndị ahịa maka ịlaghachi ngwaahịa a.
b. N'ime ụgbọ mmiri ndị ahụ n'efu, a ga-agwa ndị ahịa banyere nkwụghachi ụgwọ mbupu (enwere ike ịnye atụmatụ dabere na ụgwọ nke anyị na mbufe ndị ahịa).